[29 / 09 / 2019] တစ်ဦးမှဲ့အဖြစ်ခြောက်လအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သိုက်! .. အဆိုပါ Metro ဥမင်လိုဏ်လမ်းများဘေးအန္တရာယ်စေခြင်းငှါ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[29 / 09 / 2019] ဝယ်ယူ Make မှ ESTRAM5အမြဲတမ်းအလုပျသမား	26 Eskisehir
[29 / 09 / 2019] Samsun, Sivas မီးရထားလိုင်းသည့်အခါဖွင့်လှစ်ကြမည်နည်း	55 Samsun
Konya, Eurasia ရထားနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု Make မှ xnumx'y
ကမ္ဘာ့ 20203အတွက် Konya ၏မြို့ဖြစ်လာဆီသို့လျှင်မြန်စွာတိုးတက်ကုန်သွယ်ရေး။ ဒါဟာဥရောပအာရှရထားထဲမှာအကြီးဆုံးရထားလမ်းပြပွဲဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူး Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏အိမ်ရှင်ထုတ်ဆောင်ရွက်မည်သယ်ဆောင်။9။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဥရောပအာရှရထားစနစ်များ DONE ရေ [ပို ... ]
သငျသညျသှားပါအချည်းနှီးEskişehirအမျိုးသား Express ကိုရထားသတ်မှတ်မည်ထုတ်လုပ်မှုကြိုးပမ်းမှု!
မီးရထားအလုပ်သမားများသမဂ္ဂဌာနခွဲကသမ္မတ Ramazan Uysal "TÜLOMSAŞများ၏ရှေ့မှောက်၌အကဲဖြတ်အားထုတ်မှုများ၏စွမ်းရည်များ, ယာဉ်ကြောဖို့ငာဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပိုလျှံပွညျသူပွညျသားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့န်ထမ်းများ၏စိတ်နှလုံးကိုဒဏ်ရာရ," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ကောငျးပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Mehmet EKTAŞပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူ [ပို ... ]
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားစီမံကိန်း Canray ထိုးမြဲလက်မှတ်
ကုမ္ပဏီ Canray သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး crowning အတွက်လူမီနီယံရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်အတှေ့အကွုံYeşilova Holding ကုမ္ပဏီ 44 နှစ်, အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားစီမံကိန်းအားTÜVASAŞ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်မိတ်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Sakarya အတွက်တစ်နှစ် 2019 စက်ရုံအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့စီမံကိန်းများအတွက်TÜVASAŞ [ပို ... ]
Eskişehirမီးရထားစနစ်များ Cluster စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏Eskişehirကုန်သည်ကြီးများအသင်းသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပထမဦးဆုံးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (ESO), ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မတိုင်မီကအစည်းအဝေးမှဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်သူ ESO Kesikbaş Celalettin ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကဏ္ဍအတွက်အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းအဓိကစီမံကိန်းများကိုအကဲဖြတ်။ [ပို ... ]
Eskisehir အတွက်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းနှင့် Urays 's အမျိုးသားတရားဖြစ်ပါတယ်
-Eskisehir ပြန်လည်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်နှလုံးမှာရထားလမ်းစနစ်များကို။ 163 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏ရထားလမ်းစွန့်စားမှုအင်္ဂတေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များEskişehirကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ESO) တွင် 125 Eskişehirမှသက်သေခံ re-စင်တာများဖွစျဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လက်နက်, ဗဟိုကဏ္ဍ Eskisehir အတွက်စီမံကိန်းများနံပါတ်စေမည်။ ဤ [ပို ... ]
ရထားလမ်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာများ, ကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူများ, ပညာရှင်များနှင့်Karabükတက္ကသိုလ်ကရထားလမ်းများအသင်း, 2014 ၏ဥပဒေရေးရာတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦးအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏ရထားလမ်းစနစ်နှင့်အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်၏ရထားလမ်းအစည်းအရုံး, [ပို ... ]
KARDEMİR Eurasia ရထား Izmir တရားမျှတသော Esti ခငျြးက
အဆိုပါစနစ်များကိုကဏ္ဍ Eurasian ဒေသများအတွက်ရထားလမ်းသာနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြပွဲဥရောပအာရှရထားလမ်းတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်, 10-12 ဧပြီလ 2019 သမိုင်းရဲ့အရေးအပါဆုံးသရုပ်ဆောင်များကိုတို့တွင်ဒေသအတွက်ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင် fuarizmir အတွက်အတူတကွဆောင်ခဲ့လေ၏။ 200 [ပို ... ]
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းEskişehirအသက်မွေးမှုပူးတွဲကော်မတီဧပြီလအစည်းအဝေး, အခန်းများ ESO အဖွဲ့ဝင်များ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့သည့်မီးမောင်းထိုးအောက်မှာရှိကြ၏။ ESO, အရာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအခွအေနကပြင်ဆင်တွေ့ဆုံ5[ပို ... ]
အဆိုပါ 10 12-2019 ဧပြီလ Eurasia ရထား Fuarizmir အတွက်
သာစနစ်များကဏ္ဍ Eurasian ဒေသများအတွက်ရထားလမ်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပြပွဲဥရောပအာရှရထားလမ်းတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည် 10-12 ဧပြီလ 2019 နေ့စွဲအကြားဒေသအတွက်ရထားလမ်းကဏ္ဍ၏အရေးကြီးဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေဟာ fuarizmir အတူတူငါသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားမျှတသော [ပို ... ]
URAYS Project မှမြန်နှုန်းဆွတ်ခူး
အမျိုးသားရထားသည့်အလုပ်၏အတိုင်းအတာအတွင်းမှာတူရကီနှင့်Eskişehirသုတေသနနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းစင်တာတွင်စီမံကိန်း (URAYS ငါ) အဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုသယ်ဆောင်အရှိန်သိရသည်။ မကြာသေးမီရက်အတွင်းနည်းပညာနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဒုတိယဝန်ကြီး Hasan-အဘိုး, Anadolu Univeristy မှတစ်ဦးခရီးစဉ်အတွင်းမိခင်များတွင် [ပို ... ]
သတ္တုနှင့်စာရွက်သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့, ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အတူတူအလိုအလျောက် Bursa စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ကြာသပတေးနေ့၏ကဏ္ဍအားလုံးကိုသက်ဆိုင်သူသို့ဆောင်ခဲ့နိုဝင်ဘာလ 29 Tuyap Bursa အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲများနှင့်ကွန်ဂရက်စင်တာက၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်။ 20 342 ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုင်းပြည်များမှကိုယ်စားလှယ်များ [ပို ... ]
Durmazlar ဦးပိုင်, လက်မောင်းအင်္ဂတေပြည်တွင်းမြေအောက်များအတွက်ခဲ့သည်
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလမ်းရထား, စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် Durmazlar Holding ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်တပါးကစားသမားဒေသခံမြေအောက်ရထား၎င်း၏အင်္ကျီလက်တက်လှိမ့်ခဲ့သည်။ Durmaray အမှတ်တံဆိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကဝင်ရောက်နှင့်ကုမ္ပဏီများယနေ့လမ်းရထား၏ 2009 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေသခံအကြောင်းအရာထုတ်လုပ် Aselsan [ပို ... ]
Eskisehir အုပ်ချုပ်ရေးမှူးÖzdemirခေတ်TÜLOMSAŞမှ General Manager Hayri Avci အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသွားရောက်လည်ပတ်လုပ်သားများနှင့်အတူ chatting စက်ရုံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာÇakacakကြောင့်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များ [ပို ... ]
operating ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တည်ရှိသော 8 ။ နှင့် 35 ။ TEKNOSAB ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ", BCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ Cuneyt Sener ၏အလုပ်အကိုင်ကော်မတီတိုးချဲ့ Sectoral ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာစကားပြောသော teknosab စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ပုံစံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအများစုသတိပြု [ပို ... ]
Durmazlar ဇာတိဓါတ်ရထား Panorama, ပိုလန်ခရီးသည်များ
ကမ္ဘာ့ xnumx'nc လမ်းရထားထုတ်လုပ်သူBursalı Durmazlar အီးယူအဖွဲ့ဝင်ပိုလန်မှပထမဦးဆုံးပို့ကုန်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အစပိုင်းမှာအရေအတွက်ကို7'' မြင်ကွင်းကျယ်က 'လမ်းရထား Olsztyn လမ်းများအားဝတျပွုပါမညျဖွစျသညျ။ Bursa Durmazlar, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလမ်းရထားပိုလန်တင်ပို့နေသည်။ ထိုအ Kocaeli တူရကီအတွက် [ပို ... ]
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ရထားစနစ်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏အစည်းအရုံး Continues နှင့်အတူ METRORAY ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
အင်ဂျင်နီယာကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှာတူရကီရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာပဲKarabükတက္ကသိုလ်တည်ရှိခြင်းနှင့်ဤအပိုင်းကိုမှဘွဲ့ရအင်ဂျင်နီယာများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့ပညာပေးနှင့်ရထားစနစ်များအစည်းအရုံးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကျွမ်းကျင်သူများနိုင်ရန်အတွက် operating တူရကီရဲ့ရထားလမ်းကဏ္ဍ, [ပို ... ]
Anadolu တက္ကသိုလ်ကနေ Giants မှရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှု
Anadolu တက္ကသိုလ်အသုံးပြုပုံ Erasmus + သည့်အသက်မွေးမှုသင်တန်းမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအောက်မှာအစီအစဉ်, ဥရောပကော်မရှင်, ဥရောပသမဂ္ဂဝန်ကြီးဌာနနှင့်အီးယူပညာရေးနှင့်လူငယ် Programs ကိုရေးစင်တာမှတင်သွင်းသည့်ဝန်ထမ်းရေးရာအတွက် "ရထားခရီးသည်န်ဆောင်မှုများသက်မွေးအရည်အချင်းများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ် [ပို ... ]
ဘင်္ဂလားဒေ့မီးရထား Tulomsas ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကော်မတီမှမြင်ကွင်းများ
21 / 12 / 2017 Levent Ozen 0
အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးÖzdemir၏ဘင်္ဂလားဒေ့ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များအများကြီးဇနီးနဲ့မီးရထားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌချောင်ဒရီအသက်အရွယ်ရလိမ့်မယ်, သူTÜLOMSAŞအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တူရကီ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပိုပြီးန်ထမ်းဖေါ်ပြခြင်းမီးရထားဧရိယာ, [ပို ... ]
လျှပ်စစ်ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်များစာတမ်းဖတ်ပွဲ (ERUSİS 2017)
16 / 10 / 2017 Levent Ozen 0
ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတူရကီရဲ့မီးရထားပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. စုပေါင်း. , ပြည်ပမှာအစီအစဉ်ကနေပြည်တွင်းနှင့်ထင်ဟပ်လှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့အတွက်လျှပ်စစ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များစာတမ်းဖတ်ပွဲ (ERUSİS 27) တွင် 28-2017 အောက်တိုဘာလ 2017 နေ့စွဲပထမဦးဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာအဖြစ်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲခေါင်းစဉ်များ [ပို ... ]
Rayder, လည်ပတ်သူများ၏Tüvasasမှ General Manager ကနေ Kocaarslan
03 / 08 / 2017 Levent Ozen 0
လက်ရှိတွင်တည်ထောင်သူနှင့်အကြားတည်ရှိသော rayder အဆိုပါကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ပါမောက္ခ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ဒေါက်တာ Ilhan Kocaarslan TÜVASAŞ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု '' ခန့်အပ်ဂုဏ်ပြုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် RAYDEN ရထားပံ့ပိုးမှုများနှင့်ထောက်ခံမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်များကိုရရှိရန်ဖြစ်ပါတယ်စနစ်များစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍပေးတော်မူလတံ့ [ပို ... ]
တစ်ဦးမှဲ့အဖြစ်ခြောက်လအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သိုက်! .. အဆိုပါ Metro ဥမင်လိုဏ်လမ်းများဘေးအန္တရာယ်စေခြင်းငှါ
ဝယ်ယူ Make မှ ESTRAM5အမြဲတမ်းအလုပျသမား
Samsun, Sivas မီးရထားလိုင်းသည့်အခါဖွင့်လှစ်ကြမည်နည်း
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဗြိတိသျှခင်းထဲကနေစက်တင်ဘာလ 29 1848
ဗြိတိသျှခင်းထဲကနေသမိုင်းစက်တင်ဘာလ 29 1848 ယနေ့အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ဘဆ်ွကနေတဆင့်အိန္ဒိယသို့တိုးချဲ့ဖို့ Calais ကနေစတင်မယ့်ဧရာမမီးရထားစီမံကိန်းကိုအတူတက်ရောက်လေ၏။ ထို့နောက်ဘေဂျင်းမှတိုးချဲ့အတွေးများ၏လိုင်းခင်း။ Related သတင်းနှင့်မီးရထား [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (537) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (975) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
အဆိုပါEskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ESTRAM5အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုကြေညာချက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပေါ် မူတည်. ။ စနစ်တွေထိန်းသိမ်းမှုပြင်ဆင်ခြင်းအချက်ပြ 1 တဦးတည်းရထားလမ်းအားဖြင့်ကြော်ငြာများသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှု၏4တဦးတည်းအလုပ်ပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ ယူခံရဖို့အလုပျသမားမြားအတှကျအမြဲတမ်း status ကို [ပို ... ]
ယာဉ်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုBaşkentliler miniscule သင်ပေးဖို့ပျော်စရာလမ်းအတွက်တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်သည်လွတ်လပ်ရေးနေ့ပန်းခြံအတွင်းယာဉ်အသွားအလာပညာရေးစင်တာ။ အဆိုပါအလွန်သေးငယ်သော; လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်ယာဉ်မောင်းစက်ဘီးစီးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည်အထိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာပညာရေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုက်နာရမည် [ပို ... ]